Avast anotengesa iyo data yemamirioni evashandisi kumakambani makuru | Linux Vakapindwa muropa
A kanguva yapfuura ndinokuudzas kuwedzera kwe mabhurawuza akagadzirwa nekambani Avast akaunganidza mushandisi data. Izvo zvaisazivikanwa ndizvo zvavaizvitora. Zvino zvava pachena
Maererano ne kuferefeta joint Motherboard uye PCMag, iyo kambani iri kumashure kwechirongwa chakakurumbira cheantivirus urikutengesa data rakanyanya kubhurawuza padandemutande kune mazhinji emakambani makuru pasi rose.
Iwo magwaro, kubva kune chikamu cheiyo antivirus hofori Avast inonzi Jumpshot, inoratidza izvo iyo Avast antivirus chirongwa chakaiswa pakombuta yemunhu inounganidza data uye ichiitwazve neJumpshot mune zvakasiyana zvigadzirwa. Ndinoziva gare gare vanotengesa kumakambani makuru kwazvo pasi rose. Vamwe vekare, varipo uye vanogona kuve vatengi vanosanganisira Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit pakati pemamwe marudzi mazhinji.
Imwe yezvigadzirwa zveJumpshot zvinonyanya kufarirwa ndeye "All Clicks Feed", iyo inogona kuteedzera mushandisi maitiro, kudzvanya uye kufamba kuburikidza nemawebhusaiti zvine hunyanzvi hwakanyanya.
Avast inofungidzirwa kuve nevashandisi mamirioni mazana mana apo izvo zviri kutengeswa ndezvevashandisi vane mamirioni zana. Avast anotsanangura mutsauko pakuti iwo chete unopa Jumpshot ine data reavo vashandisi avo vakapa mvumo yavo. Kunyangwe vaongorori vakatadza kuiongorora.
Avast anotengesa iyo data pane aya maitiro ekutsvagisa
avast inounganidza data revashandisi vanonyoresa uye wozovapa kuJumpshot, asi vashandisi vazhinji veAvast vakati havazive kuti Avast yaitengesa data rekuvhura, vachibvunza mibvunzo nezvekuti vainyatsoziva zvavaibvumirana nazvo here.
Zvinoenderana neruzivo rwunowanikwa neMamaboard uye PCMag, Avast akatengesa data iro Zvinosanganisira kutsvaga paGoogle, kutsvaga kwenzvimbo uye GPS zvinongedzo paGoogle Mepu, vanhu vanoshanyira makambani 'LinkedIn mapeji, YouTube mavhidhiyo anoonekwa, uye vanhu vanoshanyira mawebhusaiti ezvinonyadzisira. Izvo zvinokwanisika kuona kubva kune yakaunganidzwa data ndeipi nguva uye nguva iyo asingazivikanwe mushandisi akashanyira YouPorn uye PornHub, uye mune zvimwe zviitiko izwi rekutsvaga ravakapinda pawebhusaiti uye ndeipi vhidhiyo yavakaona.
Kunyangwe mune iyo data ruzivo rwemunhu haruna kuiswa semazita evashandisi, ivo vachiri ane yakawanda yakatarwa data rekubhurawuza, uye nyanzvi dzinodaro zvinogona kuita kuti de-kusazivisa vamwe vashandisi.
Mushure mekuonekwa kuti yaitora ruzivo kuburikidza neshanduro yekuwedzera, Avast akafunga kuzviita zvakananga kuburikidza neantivirus. Iyo femu yakatanga kubvunza ikozvino vashandisi veayo emahara antivirus mhinduro kuti vasarudze kuunganidzwa kwedata,
Mukubatsira kwechigadzirwa (iyo iyo inenge isina munhu anoverenga) inotsanangurwa:
Kana vakasaina, chishandiso icho chinova chikamu cheJumpshot dashibhodhi uye zvese zvebrowser-based internet chiitiko chichaudzwa kuJumpshot. Ndeapi ma URL aishanyirwa nemidziyo iyi, nenzira ipi uye riinhi? » anowedzera, muchidimbu mibvunzo iyo chigadzirwa chingave chinokwanisa kupindura.
Vakabvunzwa neMamaboard, kubva kuDepoti Depot ivo vakapindura nezve mashandisiro avanoita iwo data rakatengwa:
Dzimwe nguva isu tinoshandisa ruzivo rwunopihwa nevechitatu mapato kubatsira kuvandudza bhizinesi redu, zvigadzirwa zvedu uye masevhisi edu. Tinoda kuti vatapi ava vane kodzero dzakakodzera dzekugovana ruzivo urwu nesu. Mune ino kesi, isu tinogamuchira vasingazivikanwe data revateereri, iyo isingakwanise kushandiswa kuzivisa vatengi vega.
Kunyange Microsoft ichiramba parizvino kuva nehukama naJumpshot, Yelp akatsanangura kuti yanga iri yenguva chete:
Muna 2018, sechikamu chekukumbira ruzivo nezviremera zveantitrust, timu yemitemo yeYelp yakabvunzwa kuti ifungidzire maitiro eGoogle anopesana nemakwikwi pamusika wekutsvaga. trend data report iyo inogonesa kumwe kufungidzira kweGoogle's traffic drift kubva pawebhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Avast anotengesa data remamirioni evashandisi kumakambani makuru
Isu takanyatso zadzwa neuspionage. Iyo inoshanda sisitimu, ekuchengetedza zvirongwa uye mabhurawuza, ISPs ari kutisora ​​isu kune zvese. Izvo ndezvekushandisa zvishoma kusazivikanwa. Ndisati ndafunga kuti vanhu vanonetsekana chete ndivo vaishandisa zvinhu zvakaita seTor kana Linux distros kuti vasiye nzira, asi haisisiri paranoid sezvandaifunga.
Ini handioni iko kusatendeka chero kupi.
Ini ndinofungidzira kuti vashandisi veWindows kana Mac vane hanya zvishoma kuti Avast anounganidza yavo data, sezvo ivo vatoita yavo yavo yekushandisa masystem. Kana isu tikawedzera kune izvi kuti vanonyatsoshandisa iyo android kana ios nhare, izvo zvavanazvo pakombuta hazvinei hazvo zvakanyanya, chaizvo. Kana ivo vakashandisawo Alexa kana Google Imba, kuti nhau idzi kunyange dzinovatapura inonyengera zvisingaite.
Zvinofanirwa kuitwa nevashandisi ava kubvuma chokwadi: ndizvo zvigadzirwa.
Kuti vanorega kushandisa adblockers, kuti vadzivise kuverenga maEULAs nekuti vanozovatambira kana vachida iyo yemahara software kana kuti vanorega kunetsa kana iyo imwe pirated software ikaisa komputa yavo kumigodhi yemari. Usaise zvitambi pamakamera, kana kumisikidza kana kudzima GPS uchifunga kuti izvi zvinokuchengetedza kubva chero chinhu.
Kana munhu anga achiziva nezve kuvanzika kwavo, kana vachitenda kuti makomputa nemidziyo yavanayo yakafanana nemahwindo eimba yavo, ayo mweya nechiedza zvinopinda, asiwo mbavha uye kuda kuziva nezve kwavo zvakavanzika, vanhu ava vanga vari kwemakore kuti haichashandisi Windows kana Mac, vanhu ivavo vakatsvaga dzimwe nzira dzemafoni pachinzvimbo cheApple kana iOS, uye ikozvino ivo vari kutarisa Linux nhare mbozha dzinozopedzisira dzaona mwenje gore rino. Vanhu ava, kunyangwe vachishandisa Linux pakombuta, vawana maitiro akanaka ekubhurawuza, vachishandisa mabhurawuza anoremekedza zvakavanzika, injini dzekutsvaga dzisingateedzere, uye vangangodaro vakazvibvisa kubva pasocial network, kunyanya kubva kune yakazara vanhu, nekuti hazvina basa. .sechimwe chinhu kunze kwekuverengera uye kuwedzera iyo ego.
Pindura kune zvakashata
Stephan K. akadaro
Chinhu chimwe chete zvakare naAvast… Inguva inguva yavakambonyara.
Pindura kuna Stephan K
Yakagara iri antivirus iyo yaidya yakawanda zviwanikwa uye nekuda kwechikonzero icho kana kuishandisa. Zvino, zvakananga, ini handitombozvifunga senge sarudzo. Kwaziso